မန်​စီးတီးတို့ ဝက်​ဖို့ဒ်​ ကို ၈ ဂိုးပြတ်​နဲ့ ​ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ အ​ပေါ် ယာဂန်​က​လော့ ဘယ်​လို မှတ်​ချက်​​ပေး သွားခဲ့သလဲ.. - SPORTS MYANMAR
မန်​စီးတီးတို့ ဝက်​ဖို့ဒ်​ ကို ၈ ဂိုးပြတ်​နဲ့ ​ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ အ​ပေါ် ယာဂန်​က​လော့ ဘယ်​လို မှတ်​ချက်​​ပေး သွားခဲ့သလဲ..
ချန်​ပီယံ မန်​ချက်​စတာစီးတီး အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်​ပတ်​က ​နော့ဝှစ်​ကို အ​ဝေးကွင်းမှာ အံ့အားသင့်​ဖွယ်​ ရှုံးနိမ့်​ခဲ့မှုကို အ​ကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့ ပြန်​လည်​ ရုန်းထွက်​ပြီး စ​နေ​နေ့က ဝက်​ဖို့ဒ်​ကို အီတီဟတ်​မှာ ၈ ဂိုးပြတ်​ ​ချေမှုန်း ခဲ့ပါတယ်​။ လီ​ဗာပူး အသင်းကလည်း မ​နေ့ညက စတန်းဖို့ဒ်​ဘရစ်​ခ်ျ​မှာ ချဲလ်​ဆီးကို ၂ ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ အနိုင်​ယူကာ ၁၅ ပွဲဆက်​ ပရီးမီးယားလိဂ် နိုင်​ပွဲနဲ့အတူ ပြန်​လည်​ တုန့်​ပြန်​ ခဲ့ပြီး မန်​စီးတီး ကို ငါးမှတ်​ ပြန်​ဖြတ်​ကာ အမှတ်​​ပေးဇယားထိပ်​မှာ ဦး​ဆောင်​ ​နေပါတယ်​ ။
လီ​ဗာပူး နည်းပြက “ကျွန်​​တော်​ သူတို့ရဲ့ သွင်းဂိုး​တွေကို ကြည့်​ချင်​ ခဲ့ပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​ ​လေ့ကျင့်​​ရေးကွင်း က​နေ ထွက်​လာခဲ့ ပြီး​နောက်​ ၂မိနစ်​ ၅၀ စက္ကန့်​​လောက်​ပဲ ကြည့်​လိုက်​ ရပါတယ်​ ။ သွင်းဂိုး ရှစ်​ဂိုး ဘားတန်းထိတာ ၂ကြိမ်​ ပါ။ ကျွန်​​တော်​ ဒီပွဲ အ​ကြောင်း အပြည့်​အဝ နားလည်​ဖို့ အတွက်​ တစ်​ပွဲလုံး ပြန်​ကြည့်​ဖို့ လိုပါတယ်​။
ဝက်​ဖို့ဒ်​အတွက်​ က​တော့ ဒါဟာ ခက်​ခဲတဲ့ ​နေ့တစ်​​နေ့​ပါ။ ပြိုင်​ဘက်​ က စီးတီးသာ ဆိုရင်​ ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ ဘယ်​အသင်း မဆို ဒီလိုပုံစံ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​တို့လည်း လွန်​ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်​က ဒီလို အ​ခြေအ​နေမျိုး ကြုံ​တွေ့ ခဲ့ရပြီး မန်​စီးတီး ကို ၅ ဂိုးပြတ်​နဲ့ ရှုံးနိမ့်​ ခဲ့တယ်​လို့ ကျွန်​​တော်​ ထင်​ပါတယ်​။ ကိုယ့်​ဘက်​က ၁၀ ​ယောက်​တည်းနဲ့ ကစား ရတဲ့ အခါ အဆိုးဆုံး ​နေရာဟာ မန်​ချက်​စတာစီးတီး ကွင်းပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ အဲဒီည က​တော့ ကျွန်​​တော်​ ​ကောင်း​ကောင်း အိပ်​​ပျော်​ ခဲ့ပါတယ်​။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် title race ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ကလိုပဲ လီ​ဗာပူး နဲ့ မန်​စီးတီး နှစ်​သင်းသာ အဓိက အားပြိုင်​ သွားရမယ်​လို့ လူ​တော်​​တော်​များများ ယူဆ ထားခဲ့ ကြပါတယ်​။ မန်​စီးတီး နဲ့ လီ​ဗာပူး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ချန်​ပီယံဆု အတွက်​ ​နောက်​ဆုံး ပွဲစဉ်​ ၃၈ အထိ အဆုံးအဖြတ်​ ခံယူ ခဲ့ရပြီး ​နောက်​ဆုံး မှာ​တော့ ပက်​ဂွာဒီယိုလာရဲ့ အသင်းဟာ ရမှတ်​ ၉၈ မှတ်​နဲ့ ယာဂန်​က​လော့ရဲ့ အသင်းထက်​ တစ်​မှတ်​ အသာရကာ ​ဗိုလ်​စွဲ ခဲ့ပါတယ်​။
ယာဂန်​က​လော့ က “ပွဲမတိုင်​မီ ကတည်းက ထိပ်​ဆုံး ​နေရာအတွက်​ စီးတီးရဲ့ စိန်​​ခေါ်မှုကို ကျွန်​​တော်​တို့ သိပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​ အရင်​က ​ပြောခဲ့ဖူးသလိုပဲ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့​အ​ကောင်းဆုံး အသင်းပါ။ ကျွန်​​တော်​ ဒီထက်​ ဘာ​ပြော နိုင်​မှာလဲ? ကျွန်​​တော်​ ပက်​ဂွာဒီယိုလာ အ​ပေါ် ဖိအား မ​ပေးချင်​ပါဘူး။ ဘယ်​လို လုပ်​လို့ ရမှာလဲ? သူတို့ဟာ အ​ကောင်းဆုံး အချိန်​​တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​တို့လည်း သိက်​မဆိုးပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီလို ​ဘောလုံး ကစားပုံ က​တော့ ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ အသင်း​တော်​​တော်​များများ သူတို့လို မကစား နိုင်​ပါဘူး။ ကျွန်​​တော်​တို့ ကလည်း ကိုယ့်​ပုံစံနဲ့ ကိုယ်​ ကစားပြီး နိုင်​ပွဲ​တွေ ရယူဖို့ ကြိုးစား ရပါတယ်​ ။ အကယ်​၍ အခြား အသင်းတစ်​သင်းဟာ ကျွန်​​တော်​တို့ထက်​ ပို​ကောင်း​နေတယ်​ ဆိုရင်​ သူတို့နဲ့ ရင်​​ဆိုင်​ရာမှာ ကျွန်​​တော်​တို့ အနည်းဆုံး​တော့ သက်​​တောင့်​သက်​သာ မကစား နိုင်​​အောင်​ လုပ်​သွားမှာပါ။
​နောက်​ဆုံး မှာ​တော့ အမှတ်​ရဖို့ပဲ ကြိုးစား ကြတာပါပဲ။ ဒါဟာ ကျွန်​​တော်​တို့ ကြိုးစား ​နေတဲ့ အရာပါ။ နည်းစနစ်​ပိုင်းတို့ ဘာတို့ ပြိုင်​ဆိုင်​တယ်​ ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အားလုံးဟာ ရမှတ်​​တွေ အတွက်​ပါပဲ။ ကျွန်​​တော်​က​တော့ အမှတ်​​ပေးဖလား အတွက်​ ၂သင်းသာ အဓိက ပြိုင်​ဆိုင်​ သွားရလိမ့်​မယ်​လို့ အခုထိ မမြင်​ ​သေးပါဘူး။ ဒီအချိန်​မှာ ကျွန်​​တော်​တို့ ဒါကို ​တွေးလို့ မ​ရ​​သေးပါဘူး။ ပွဲစဉ်​ ၆ ပဲ ရှိပါ​သေးတယ်​။ ချန်​ပီယံဆု အ​ကြောင်း ​ပြောဖို့ ၃၂ပွဲ​တောင်​ ကျန်​​နေ ပါ​သေးတယ်​။ ဒါဟာ အရမ်း ​စော​နေ ​သေးတယ်​လို့ ကျွန်​​တော်​ ​ပြောချင်​ပါတယ်​။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
မနျ​စီးတီးတို့ ဝကျ​ဖို့ဒျ​ ကို ၈ ဂိုးပွတျ​နဲ့ ​ခမြှေုနျးခဲ့တဲ့ အ​ပျေါ ယာဂနျ​က​လော့ ဘယျ​လို မှတျ​ခကျြ​​ပေး သှားခဲ့သလဲ..
ခနျြ​ပီယံ မနျ​ခကျြ​စတာစီးတီး အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ တဈ​ပတျ​က ​နော့ဝှဈ​ကို အ​ဝေးကှငျးမှာ အံ့အားသငျ့​ဖှယျ​ ရှုံးနိမျ့​ခဲ့မှုကို အ​ကောငျးဆုံး ပုံစံနဲ့ ပွနျ​လညျ​ ရုနျးထှကျ​ပွီး စ​နေ​နကေ့ ဝကျ​ဖို့ဒျ​ကို အီတီဟတျ​မှာ ၈ ဂိုးပွတျ​ ​ခမြှေုနျး ခဲ့ပါတယျ​။ လီ​ဗာပူး အသငျးကလညျး မ​နညေ့က စတနျးဖို့ဒျ​ဘရဈ​ချြ​မှာ ခြဲလျ​ဆီးကို ၂ ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ အနိုငျ​ယူကာ ၁၅ ပှဲဆကျ​ ပရီးမီးယားလိဂျ နိုငျ​ပှဲနဲ့အတူ ပွနျ​လညျ​ တုနျ့​ပွနျ​ ခဲ့ပွီး မနျ​စီးတီး ကို ငါးမှတျ​ ပွနျ​ဖွတျ​ကာ အမှတျ​​ပေးဇယားထိပျ​မှာ ဦး​ဆောငျ​ ​နပေါတယျ​ ။
လီ​ဗာပူး နညျးပွက “ကြှနျ​​တျော​ သူတို့ရဲ့ သှငျးဂိုး​တှကေို ကွညျ့​ခငျြ​ ခဲ့ပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​ ​လကေ့ငျြ့​​ရေးကှငျး က​နေ ထှကျ​လာခဲ့ ပွီး​နောကျ​ ၂မိနဈ​ ၅၀ စက်ကနျ့​​လောကျ​ပဲ ကွညျ့​လိုကျ​ ရပါတယျ​ ။ သှငျးဂိုး ရှဈ​ဂိုး ဘားတနျးထိတာ ၂ကွိမျ​ ပါ။ ကြှနျ​​တျော​ ဒီပှဲ အ​ကွောငျး အပွညျ့​အဝ နားလညျ​ဖို့ အတှကျ​ တဈ​ပှဲလုံး ပွနျ​ကွညျ့​ဖို့ လိုပါတယျ​။
ဝကျ​ဖို့ဒျ​အတှကျ​ က​တော့ ဒါဟာ ခကျ​ခဲတဲ့ ​နတေ့ဈ​​နေ့​ပါ။ ပွိုငျ​ဘကျ​ က စီးတီးသာ ဆိုရငျ​ ကမ်ဘာ​ပျေါမှာ ဘယျ​အသငျး မဆို ဒီလိုပုံစံ ဖွဈ​နိုငျ​ပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​တို့လညျး လှနျ​ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ​က ဒီလို အ​ခွအေ​နမြေိုး ကွုံ​တှေ့ ခဲ့ရပွီး မနျ​စီးတီး ကို ၅ ဂိုးပွတျ​နဲ့ ရှုံးနိမျ့​ ခဲ့တယျ​လို့ ကြှနျ​​တျော​ ထငျ​ပါတယျ​။ ကိုယျ့​ဘကျ​က ၁၀ ​ယောကျ​တညျးနဲ့ ကစား ရတဲ့ အခါ အဆိုးဆုံး ​နရောဟာ မနျ​ခကျြ​စတာစီးတီး ကှငျးပဲ ဖွဈ​ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ အဲဒီည က​တော့ ကြှနျ​​တျော​ ​ကောငျး​ကောငျး အိပျ​​ပြျော​ ခဲ့ပါတယျ​။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ title race ကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ကလိုပဲ လီ​ဗာပူး နဲ့ မနျ​စီးတီး နှဈ​သငျးသာ အဓိက အားပွိုငျ​ သှားရမယျ​လို့ လူ​တျော​​တျော​မြားမြား ယူဆ ထားခဲ့ ကွပါတယျ​။ မနျ​စီးတီး နဲ့ လီ​ဗာပူး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ခနျြ​ပီယံဆု အတှကျ​ ​နောကျ​ဆုံး ပှဲစဉျ​ ၃၈ အထိ အဆုံးအဖွတျ​ ခံယူ ခဲ့ရပွီး ​နောကျ​ဆုံး မှာ​တော့ ပကျ​ဂှာဒီယိုလာရဲ့ အသငျးဟာ ရမှတျ​ ၉၈ မှတျ​နဲ့ ယာဂနျ​က​လော့ရဲ့ အသငျးထကျ​ တဈ​မှတျ​ အသာရကာ ​ဗိုလျ​စှဲ ခဲ့ပါတယျ​။
ယာဂနျ​က​လော့ က “ပှဲမတိုငျ​မီ ကတညျးက ထိပျ​ဆုံး ​နရောအတှကျ​ စီးတီးရဲ့
စိနျ​​ချေါမှုကို ကြှနျ​​တျော​တို့ သိပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​ အရငျ​က ​ပွောခဲ့ဖူးသလိုပဲ သူတို့ဟာ ကမ်ဘာ့​အ​ကောငျးဆုံး အသငျးပါ။ ကြှနျ​​တျော​ ဒီထကျ​ ဘာ​ပွော နိုငျ​မှာလဲ? ကြှနျ​​တျော​ ပကျ​ဂှာဒီယိုလာ အ​ပျေါ ဖိအား မ​ပေးခငျြ​ပါဘူး။ ဘယျ​လို လုပျ​လို့ ရမှာလဲ? သူတို့ဟာ အ​ကောငျးဆုံး အခြိနျ​​တှေ ရှိခဲ့ပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​တို့လညျး သိကျ​မဆိုးပါဘူး။ ဒါ​ပမေယျ့​ ဒီလို ​ဘောလုံး ကစားပုံ က​တော့ ကမ်ဘာ​ပျေါမှာ အသငျး​တျော​​တျော​မြားမြား သူတို့လို မကစား နိုငျ​ပါဘူး။ ကြှနျ​​တျော​တို့ ကလညျး ကိုယျ့​ပုံစံနဲ့ ကိုယျ​ ကစားပွီး နိုငျ​ပှဲ​တှေ ရယူဖို့ ကွိုးစား ရပါတယျ​ ။ အကယျ​၍ အခွား အသငျးတဈ​သငျးဟာ ကြှနျ​​တျော​တို့ထကျ​ ပို​ကောငျး​နတေယျ​ ဆိုရငျ​ သူတို့နဲ့ ရငျ​​ဆိုငျ​ရာမှာ ကြှနျ​​တျော​တို့ အနညျးဆုံး​တော့ သကျ​​တောငျ့​သကျ​သာ မကစား နိုငျ​​အောငျ​ လုပျ​သှားမှာပါ။
​နောကျ​ဆုံး မှာ​တော့ အမှတျ​ရဖို့ပဲ ကွိုးစား ကွတာပါပဲ။ ဒါဟာ ကြှနျ​​တျော​တို့ ကွိုးစား ​နတေဲ့ အရာပါ။ နညျးစနဈ​ပိုငျးတို့ ဘာတို့ ပွိုငျ​ဆိုငျ​တယျ​ ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အားလုံးဟာ ရမှတျ​​တှေ အတှကျ​ပါပဲ။ ကြှနျ​​တျော​က​တော့ အမှတျ​​ပေးဖလား အတှကျ​ ၂သငျးသာ အဓိက ပွိုငျ​ဆိုငျ​ သှားရလိမျ့​မယျ​လို့ အခုထိ မမွငျ​ ​သေးပါဘူး။ ဒီအခြိနျ​မှာ ကြှနျ​​တျော​တို့ ဒါကို ​တှေးလို့ မ​ရ​​သေးပါဘူး။ ပှဲစဉျ​ ၆ ပဲ ရှိပါ​သေးတယျ​။ ခနျြ​ပီယံဆု အ​ကွောငျး ​ပွောဖို့ ၃၂ပှဲ​တောငျ​ ကနျြ​​နေ ပါ​သေးတယျ​။ ဒါဟာ အရမျး ​စော​နေ ​သေးတယျ​လို့ ကြှနျ​​တျော​ ​ပွောခငျြ​ပါတယျ​။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။